बाल्न - यो ... उपचार, पहिलो सहायता, डिग्री बल्न
लगभग सबैको कम्तिमा आफ्नो जीवनमा एक पटक चरम अवस्थामा आफूलाई फेला पर्यो वा जीवन खतरामा पार्ने अवस्था थियो। फलस्वरूप, तपाईंलाई स्वास्थ्य महत्वपूर्ण हानि कि चोट लागेको एक किसिम प्राप्त गर्न सक्छन्। यस लेखमा हामी के छलफल गर्नेछन् बल्छ, प्रकार, हदसम्म, यस्तो चोट लागेको मद्दत।
को बल्न के हो
एक आघात उत्पादन उल्लेख छैन, पनि घर मा सम्भव छ पाउनुहोस्। थर्मल, रासायनिक, बिजुली, विकिरण जोखिम कारण जुन छाला को एक क्षति, - बाल्न। प्रायजसो, यी घाइते छाला को माथिल्लो तहहरू प्रभावित, तर गंभीर अवस्थामा मांसपेशी, रक्त नली र पनि हड्डी भोग्न सक्छन्।
तपाईं बल्न कसरी निको पार्न गर्न आश्चर्य भने, जवाफ क्षति को डिग्री र हदसम्म निर्भर गर्नेछ। केही अवस्थामा घर उपचार संग व्यवस्थापन गर्न यो सम्भव छ, तर कहिलेकाहीं यो एक गम्भीर विशेष हेरविचार लाग्छ।
कारण, बल्न आफ्नो लक्षण र क्षति को संकेत द्वारा विशेषता छन् जो कारण, एक किसिम हुन सक्छ। बल्न प्रकुपित गर्न सक्नुहुन्छ:
जीवाणु (एक तथाकथित आगो blight)।
जला आफ्नो लक्षणहरू र individualized उपचार आवश्यक हुनेछ त्यसैले यी सबै कारक, बदलिने डिग्री संग असर गर्न सक्छ।
बल्न को किसिमहरु
सबै भन्दा साधारण थर्मल बल्न हो, छ, जोखिम को एक परिणाम रूपमा प्राप्त हुन्छन् ती:
आगो। अक्सर माथिल्लो श्वसन पर्चा, अनुहार बिग्रेको छ। त्यहाँ पुर्जा को हानि हुँदा, सबैभन्दा ठूलो कठिनाई भएको जलेको क्षेत्रहरूबाट वस्त्र हटाउने प्रक्रिया छ।
पानी उम्लिरहेको। लगभग हरेक यो अनुभव। क्षेत्र सानो, तर महत्वपूर्ण गहिराई हुन सक्छ।
स्टीम। यस्तो क्षति सामान्यतया समस्या धेरै कारण छैन।
तातो वस्तुहरु: तिनीहरूले स्पष्ट सीमाहरु र गहिरो घाउ छोड्न गर्छन।
जब क्षति को थर्मल बल्न डिग्री धेरै कारक निर्भर:
थर्मल चालकता को डिग्री;
स्वास्थ्य सामान्य राज्य र प्रभावित छाला।
रासायनिक बाल्न - एक छाला lesion जस्तै विभिन्न संक्षारक पदार्थ परिणामस्वरूप:
एसिड (जस्तै जोखिम सामान्यतया खोक्रो lesion पछि)।
जस्तै भारी धातु लवण चाँदी नाइट्रेट, जस्ता क्लोराइड, अक्सर छाला सतहमा बल्न कारण जो।
विद्युत बल्न को प्रवाहकीय सामाग्री संग सम्पर्क पछि प्राप्त गर्न सकिन्छ। वर्तमान द्रुत मांसपेशी, रगत, cerebrospinal तरल पदार्थ मार्फत फैलियो। मानव जोखिम लागि जोखिम 0.1 भन्दा बढी ए हो
को विशिष्ठ सुविधा बिजुली आघात प्रवेश निस्कन अंक को उपस्थिति छ। यो वर्तमान लेबल तथाकथित। Lesion क्षेत्र सामान्यतया सानो तर गहिरो छ।
विकिरण बल्न सम्बद्ध गर्न सकिन्छ:
यूवी विकिरण संग। यस्तो बल्न सजिलै दिउँसो समयमा sunbathe गर्न प्रशंसक कमाउन सक्नुहुन्छ। Lesion क्षेत्र घर उपचार को मद्दत सामना गर्न सक्दैन अक्सर सामान्यतया ठूलो छ, तर।
विकिरण ionizing गर्न जोखिम संग। जब यो मात्र होइन छाला, तर पनि आसन्न अंगहरु र Tissues असर गर्छ।
इन्फ्रारेड विकिरण संग। यो अक्सर कोर्नियल जला, रेटिना, छाला गराउँछ। हार यो नकारात्मक कारक को प्रभाव को अवधि भर पर्छ।
र जला को एक प्रकार - यो आगो blight, जो सूक्ष्मजीवहरु केहि प्रकारको हुन सक्छ छ। खुलारूपमा पनि यस्तो staphylococcal सिंड्रोम जल छाला को विकास रूपमा पनि मानव जीवनको खतरामा सक्ने राज्य गर्न साना गांठदार घाउ देखि फरक हुन्छ।
डिग्री बल्न र आफ्नो अभिव्यक्ति
बाल्न पूर्ण नगण्य रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ, र जरुरी hospitalization चाहिन्छ भनेर यस्तो। को lesion को जटिलता आधारमा, प्रभाव पनि प्रत्येक अन्य देखि एकदम भिन्न छन्। त्यहाँ बल्न धेरै डिग्री हो:
पहिलो डिग्री (म) सजिलो हुन मानिन्छ। यो जला, अलि कति सुनिंनु को साइटमा छाला क्षेत्र को राता असर भने। यो क्षति छाला मात्र बाहिरको तहहरू असर गर्छ, त्यसैले कुनै गम्भीर जटिलताहरू अवस्थित छैन, विशेष उपचार आवश्यक छ, र केही दिनमा, लगभग कुनै बल्न को ट्रेस छैन।
चिह्नित जलेको क्षेत्रमा दुखाइ, राता, सुनिंनु: ग्रेड द्वितीय गम्भीर छ। कारण epidermis को detachment गर्न blisters को गठन पालन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले तिनीहरूलाई लगभग दुई हप्ता पछि आफ्नै Showdown, दिन भने, पूर्ण निको कुनै पनि निशान बिना हुन्छ।
III-एक डिग्री। यो हार को epidermis, तर पनि बाल follicles भाग मात्र होइन असर संग, छाला मा स्थित ग्रन्थीहरूको। कारण छाला को सम्पूर्ण मोटाइ भन्दा सर्छ सुनिंनु भास्कुलर परिवर्तन गर्न ऊतक को मृत्यु मनाइयो।3नै एक पाप्रो खैरो वा हल्का खैरो रंग खेल्छ पछि डिग्री बाल्न, तर यो blisters आवश्यक अघि जो प्रभावशाली आकार पुग्न सक्दैन। निको लामो समय हो र चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक छ।
III-बी स्तर। जला छाला को सबै तहहरू, क्युटेनियस बोसो सहित कब्जा। गठन blisters तरल पदार्थ भरिएको, रगत-streaked। दुखाइ पूरै नम्र वा अनुपस्थित हुन सक्छ। यस्तो चोट लागेको सफल असम्भाव्य छन् सामना।
4 डिग्री बाल्न। सबैभन्दा गम्भीर रूप। यो मांसपेशिहरु, tendons र पनि हड्डी को कब्जा संग छाला को सबै तहहरू को हार मनाइन्छ। एक पाप्रो गाढा गठन लगभग कालो रंग मा, यो शिरापरक जहाजहरु मार्फत देख्न सकिन्छ। क्षतिग्रस्त स्नायु अन्त को हार को परिणाम, ताकि रोगी दुखाइ लगभग महसुस गर्दैन। विषाक्तता को धेरै उच्च जोखिम र विभिन्न जटिलताहरू विकास।
अक्सर बाल्न - यो एक डिग्री, तर धेरै को संयोजन छैन। स्थिति खुलारूपमा रूपमा प्रभावित क्षेत्र निर्धारण गरे। यो आधारमा, त्यहाँ बल्न हो:
व्यापक जसमा प्रभावित छाला को% 15।
जला व्यापक छ र छाला को 25% भन्दा प्रभावित भने, जला रोग को एक महान likelihood छ।
एक जला रोग के हो?
यो जटिलता र खुलारूपमा को घटना धेरै कारक निर्भर:
पीडित को उमेर।
प्रभावित क्षेत्र को स्थान।
यसको विकास मा चरणमा निम्न रोग बाल्न:
1 शक। धेरै दिन धेरै घन्टा देखि पछिल्लो गर्न सक्छन्, यो सबै प्रभावित क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ। आघात धेरै भिन्न डिग्री:
पहिलो प्रति मिनेट 90 Beats को दायरामा दुखाइ, सामान्य दबाव र मुटुको दर जल द्वारा विशेषता छ।
दोस्रो डिग्री हृदय प्राय कुट्छ मा, दबाब, कम शरीर को तापमान, तिर्खा देखिन्छ थोपा।
जब छाला को 60% भन्दा lesion आघात को3डिग्री अवलोकन छ। अवस्था चिन्ताजनक। बल्लतल्ल detectable, कम दबाव नाडी।
2. toxemia बाल्न। यो कारणले गर्दा शरीर मा ऊतक टूटने उत्पादनहरु को प्रभाव गर्न हुन्छ। सामान्यतया केही दिन चोट पछि हुन्छ र 1-2 हप्ता रहन्छ। एकै समयमा व्यक्ति कमजोरी, वाकवाकी, सायद उल्टी, ज्वरो महसुस।
3. septicotoxemia। यो 10 दिन सुरु र धेरै हप्तासम्म रहन्छ। संक्रमण को अभिवृद्धि। उपचार को गतिशीलता नकारात्मक हुनेछ भने, यो मृत्यु खतरनाक। जला4डिग्री वा गहिरो छाला घाउ थियो भने यो उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ।
5 स्वास्थ्यलाभ। प्रभावकारी दबाइ उपचार जला घाउ को निको र आन्तरिक अङ्गहरूको पुनस्थापित खत्म।
जला रोग को विकास रोक्न, तपाईं अस्पताल लगियो सिकार बाल्न पर्छ। डाक्टर को चोट लागेको को कठोरता को डिग्री आकलन गर्न सक्षम हुनेछ र प्रभावकारी सहयोग हुनेछ।
बल्न लागि पहिलो सहायता
जो कारक एक जला कारण हुन सक्छ, तपाईं पहिलो निम्न कदम प्रदर्शन गर्न आवश्यक:
विनाशको स्रोत हटाउनु।
चाँडै सुन्दर छाला क्षेत्र प्रभावित।
बल्न को उपचार र स्टेराइल लाउने लागू।
आवश्यक छ यदि एम्बुलेन्स कल।
यो अवस्थामा हराएको गर्न र हानिकारक कारक कसरी वा सुरक्षित स्थानमा निर्मूल गर्न सकिन्छ भन्दा छिटो मान्छे ल्याउन महत्त्वपूर्ण छ। यो छाला घाउ को डिग्री निर्भर हुनेछ। तीव्र ठंडा स्वस्थ ऊतक विनाश रोक्न मद्दत गर्छ। जला3डिग्री छ भने, यस्तो उपाय गरे छैन।
को हडताली कारक आधारमा, पहिलो-सहायता उपाय आफ्नै nuances हुन सक्छ। का थप तिनीहरूलाई विचार गरौं।
थर्मल बल्न लागि पहिलो सहायता
यो अवस्थामा आफूलाई वा आफ्नो परिवार मदत गर्न कसरी थाहा आवश्यक छ त्यसैले यी घाइते संग, लगभग आफ्नो जीवन सबैलाई पाइन्छ। निम्नानुसार यस प्रकार को बल्न लागि घर हेरविचार छ:
छिटो तपाईं कसरी हानिकारक कारक को प्रभाव निर्मूल गर्न सक्छन्, त्यो छ, आगो क्षेत्र बाट झिक्न, हटाउन वा जल लुगा बुझाने गर्न।
जला सानो छ भने, यो 10-15 मिनेट को लागि पानी चलिरहेको संग प्रभावित क्षेत्र शांत र त्यसपछि सफा नम कपडा बनाउन आवश्यक छ।
थप गम्भीर बल्न लागि, ठंडा छैन आवश्यक छ, तर यो एक नैपकिन संग जला ढाक्न आवश्यक छ।
सजाय को संभावना हटाउन।
यस्तो "ibuprofen", "Paracetamol" को रूपमा एक analgesic लिन।
यो थर्मल बल्न द्वारा निषेधित:
यो घाउ गर्न फँस छ भने बन्द वस्त्र पट्टी।
को blisters पियर्स।
प्रभावित क्षेत्र छोएर।
धब्बा घिउ, क्रीम, आयोडिन, पेरोक्साइड र अन्य पदार्थ घाउ।
तपाईं ऊन, बरफ पैच राख्न सक्नुहुन्छ।
जला गम्भीर छ भने, तपाईं चिकित्सा हेरविचार गर्न आवश्यक हुनेछ।
अक्सर, यी घाउ रासायनिक उद्योग छन्, तर तपाईं सुरक्षा नियमहरु पालना छैन भने यो सम्भव र रसायन वर्ग छ। रासायनिक उजागर गर्दा हुनुपर्छ चाँडै यसको प्रभाव neutralize।
रासायनिक बल्न एसिड मद्दत घाउ सोडा समाधान वा Soapy पानी उपचार मा हुन्छन्। क्षार प्रभावित भने, त्यसपछि यो पहिलो राम्ररी पानी rinsed छ, र त्यसपछि 2% एसिटिक वा साइट्रिक एसिड संग उपचार।
जब तपाईं प्राप्त एक रासायनिक अधिक गम्भीर व्यावसायिक मद्दत खोज्न हुनेछ बल्छ।
विद्युत बल्न मद्दत
जलाइएको बिजुली आघात प्राप्त घरमा वा काम हुन सक्छन्। सबै को पहिले विनाश स्रोत neutralize गर्न आवश्यक छ। मात्र सुरक्षित तरिका यो। घाउ एक नैपकिन ढाकिएको हुनुपर्छ।
तपाईं bruised प्राप्त गर्न सक्छन्, र न्यानो चिया पिउन र पीडित एक बेहोशि औषधि दिन पर्याप्त हुनेछ। गम्भीर घाइते चेतना को हानि हुन सक्छ। यस मामला मा थप सहायता उपाय गर्न Resort गर्न आवश्यक छ:
सिकार लागि सहज स्थिति पत्ता लगाउनुहोस्।
त्यहाँ ताजा हावा को एक आगमन थियो निश्चित गर्नुहोस्।
अतिरिक्त वस्त्र को एयरवेज लिबरेट।
टाउको एक पक्ष गर्न पारिएको छ।
एक एम्बुलेन्स को आगमन सम्म नाडी र साँस पालना गर्न।
को चोट त्यहाँ एक हृदय गिरफ्तारी थियो भनेर गम्भीर छ भने, यो के गर्न तुरून्त आवश्यक छ CPR हृदय को मांसपेशी को छाती संकुचन संग।
यो पहिलो-सहायता को गति एक व्यक्तिको जीवन निर्भर जो परिस्थिति छन् कि सम्झना हुनुपर्छ।
विकिरण बल्न र पहिलो सहायता
यस्तो क्षति प्राप्त द्वारा पराबैंगनी, इन्फ्रारेड र विकिरण कारण हुन सक्छ। बल्न यस प्रकारको पर्याप्त भएको प्रोटिन अणु को संरचना परिवर्तन गराउँछ जो कि आयनीकरण ऊतक मा अरूबाट अलग छ।
विकिरण मा बल्न कठिनाई आफ्नै डिग्री:
पहिलो डिग्री राता, खुजली र बलिरहेको द्वारा विशेषता छ।
जब दोस्रो शक्ति blisters देखिन्छन्।
ती सूचीबद्ध लक्षण भन्दा तेस्रो डिग्री ऊतक necrosis र सामेल जटिलताहरू समावेश गर्नुहोस्।
विकिरण बल्न प्राप्त गरेपछि पहिलो सहायता प्रदान गर्दा, छैन:
आफ्नो हातले घाउ स्पर्श वा गैर-स्टेराइल वस्तुहरू राखे।
यदि बुलबुले देखा, त्यसपछि तिनीहरूले घायल गर्न सकिन्छ।
घाउ को कस्मेटिक उपचार को लागि प्रयोग गर्नुहोस्।
बरफ लागू हुन्छ। यो केवल शीतदंश नेतृत्व गर्न सक्दैन, तर पनि एक कारण जला आघात तापमान मा अचानक परिवर्तन देखि।
कारण आँखा बल्न माथि छलफल गरिएका ती कारक सबै बन्न सक्छ। को स्थानीयकरण यो छुट्टयाएर आधारमा, फरक हुन सक्छ:
विनाशको डिग्री फरक हुन सक्छ, र यदि पहिलो घरमा उपचार गर्न एकदम उत्तरदायी छ र एक अनुकूल नतिजा छ, अधिक गम्भीर चोट लागेको अस्पताल बसाइ आवश्यक र नतिजा दयनीय हुन सक्छ।
परिणामस्वरूप आँखा बल्न गर्न दर्शाउन हुनेछ साइन्स, निम्न:
राता र सुनिंनु।
प्रकाश को डर।
दृश्य acuity मा घटाउनुहोस्।
कुनै पनि दिशा मा intraocular दबाव मा परिवर्तन।
त्यहाँ आँखा गर्न विकिरण क्षति भएको थियो भने, माथि लक्षण केही नै प्रकट गर्न सक्छ।
सम्पर्क को मामला मा द्रुत हुनुपर्छ रसायन आँखा मा 15 मिनेट को लागि पानी चलिरहेको संग धुन। उदाहरणका लागि, "Floksal" को लागि, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने घटेको ड्रिप। आँखा वरिपरि छाला greased गर्न सकिन्छ, एक कपडा संग कवर र एक नेत्र रोग विशेषज्ञ गर्न रोगी पठाउनुहोस्।
एक बीम गर्न भन्छिन् जो वेल्डिंग द्वारा बाल्न, तुरुन्तै उत्पन्न हुन सक्छ, तर जोखिम पछि केही घण्टा पछि। यस्तो घाउ संग विशेषता संकेत हो:
आँखा बलियो काटन दुखाइ;
पानी जस्तो आँखा;
दर्शनमा अचानक कमी;
glare को डर।
यसलाई असर भने आँखा तुरुन्तै सहायता प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसबाट उपचार को प्रभावकारिता निर्भर हुनेछ।
को बल्न खुलारूपमा फरक हुन सक्छ रूपमा र उपचार दुई प्रकार को छ:
उपचार को विकल्प धेरै कारक निर्भर:
कुल lesion क्षेत्र;
जला को गहिराई;
स्थान चोट को;
जला सुनेपछि कि कारण;
जला रोग को विकास;
हामी बल्न को उपचार को लागि बन्द विधि विचार भने, उहाँले चिकित्सकीय दबाइ संग लाउने घाउ गर्न आवेदन गरे। त्यहाँ एक जला खोक्रो र नम्र हुँदा, त्यसपछि एक पट्टी छैन पनि बारम्बार परिवर्तन गर्न गर्नुभयो - घाउ चाँडै निको पार्नुहुन्छ।
दोस्रो डिग्री को उपस्थिति मा उदाहरणका लागि, स्थान superimposed bactericidal nanodiamonds उपयोग गरदै मा बाल्न, "levomikol" वा "Silvatsin"। तिनीहरूले जीवाणुहरु को वृद्धि बाधित। एक पट्टी आवश्यक हरेक दुई दिन छ परिवर्तन गर्नुहोस्।
डिग्री3र4को बल्न को मामला मा, घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने र पाप्रो पछि गायब (यो सामान्यतया 2-3 हप्ता हुन्छ रूपमा) प्रयोग गर्न सकिन्छ Bactericidal nanodiamonds उपयोग गरदै आसपास क्षेत्रमा पाप्रो को गठन व्यवहार गर्न पहिलो आवश्यक मा त।
उपचार को बन्द विधि यसको आफ्नै फाइदा र बेफाइदा छ। पूर्व निम्न समावेश:
को लाउने घाउ मा एक संक्रमण प्राप्त गर्दैन।
यसलाई यांत्रिक क्षति देखि घाउ सुरक्षित राख्दछ।
Medicaments छिटो निको बढाउँछ।
बेफाइदा निम्न देखि उठ्छन्:
तपाईं पट्टी विरामी अनुभव बेचैनी परिवर्तन भने।
ऊतक मरिरहेका नशा प्रकुपित सक्छ।
यस्तो पराबैंगनी विकिरण, जीवाणुरोधी फिल्टर रूपमा विशेष प्रविधी, प्रयोग उपचार को बन्द विधि मा। तिनीहरूले सामान्यतया विशेष जला केन्द्र उपलब्ध छन्।
उपचार को यो विधि सुक्खा पाप्रो को तीव्र गठन बढवा दिन्छ। अक्सर यो अनुहार, perineum र घाँटी को बल्न लागि प्रयोग गरिन्छ।
केही अवस्थामा, शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप गर्न Resort गर्न बल्न भारी र ठूलो क्षेत्रमा जफत, यो आवश्यक छ जब। यसलाई निम्न प्रकार प्रयोग गर्दछ:
Necrotomy। डाक्टर को Tissues गर्न रगत आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, पाप्रो मार्फत कटौती। तपाईं छैन भने, तपाईंले necrosis विकास हुन सक्छ।
Necrosectomy। अक्सर यो3डिग्री बल्न मा मरेको ऊतक हटाउन गरेको छ। घाउ राम्रो साफ छ, suppuration रोक्छ।
एउटा कोसेढुङ्गो necrectomy। यो गहिरो बल्न मा प्रदर्शन र अघिल्लो विधि संग तुलना बढी कोमल छ। ऊतक हटाउन धेरै पासेसहरू मा बाहिर छ।
अंगच्छेद। सबैभन्दा गम्भीर अवस्थामा, उपचार काम गर्छ जब छैन, यो आवश्यक necrosis थप प्रसार रोक्न गर्न limb हटाउन छ।
सर्जरी सबै विधिहरू, पछिल्लो बाहेक, त्यसपछि छाला प्रत्यारोपण अन्त्य। अक्सर विरामीहरु आफ्नै छाला, अन्य साइटहरु बाट लिएको प्रत्यारोपण गर्न असमर्थ।
बल्न व्यवहार गर्न लोकप्रिय तरिका
धेरै घरमा जला कसरी निको पार्न गर्न सोच गर्दै हुनुहुन्छ? को क्षति ग्रेड3र4सन्दर्भमा, यहाँ प्रश्न पनि छलफल गरिएको छैन - र एक अस्पतालमा मात्र उपचार हुनुपर्छ। बल्न लाइटर यो घर निको पार्न प्रयास गर्न सम्भव छ।
त्यहाँ परम्परागत चिकित्सकहरु थुप्रै सिद्ध तरिका, तिनीहरूलाई सबैभन्दा लोकप्रिय छन् र निम्न प्रदर्शन छ:
तपाईं एक प्राप्त गर्नुभयो भने घामले डढाउने काम, असल उहाँलाई बेकिंग सोडा सामना गर्न मदत गर्नेछ।
बलियो चिया एक संकुचन पनि प्रभावित राज्य राहत सक्षम छ।
स्टार्च र पानी ग्लास संरचना को 1 तालिका चम्चा बाट तयार र प्रभावित क्षेत्रमा यो धेरै पटक एक दिन लागू।
impregnate gauze समुद्र buckthorn तेल र जला लागू भने, त्यसपछि निको छिटो जानुहोस् हुनेछ।
केही कि बल्न2डिग्री राम्रो चाँडै कच्चा आलु संग निको हुन सक्छ भन्ने विश्वास। हरेक3मिनेट ताजा आलु Wedges लागू हुनुपर्छ। तुरुन्तै चोट पछि यो उपचार सुरु गर्न भने Blisters देखिन्छन्।
सूर्यमुखी तेल को3चमचा र 1 चम्चा beeswax को लेप तयार। यो संरचना 3-4 पटक एक दिन हुनुपर्छ लागू हुन्छ।
यो केवल एक मामूली जला हुन सक्छ स्वास्थ्य मा कुनै प्रभाव संग आफ्नै सामना गर्न भनेर सम्झनु पर्छ। गम्भीर घाइते चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक छ।
बल्न को जटिलताहरू
कुनै पनि जला चोट लागि विशेष गरी ठूलो क्षेत्रमा मात्र अनिश्चित छैन, तर पनि कुनै पनि समय सामेल गर्न सक्नुहुन्छ छ एक संक्रमण। जोखिम कारक sleduyuie अवस्थामा समावेश:
तपाईं 30% भन्दा शरीर सतह क्षेत्र हिट भने।
जला छाला को सबै तहहरू कब्जा।
शिशु र बुढेसकालमा।
संक्रमण कारण कि जीवाणुहरु को एन्टिबायोटिक प्रतिरोध।
अनुचित हेरविचार र घाउ हेरविचार।
प्रत्यारोपण अस्वीकार गरेपछि भयो।
जटिलताहरुलाई जोखिम कम गर्न, उपचार विशेष क्लिनिक मा बाहिर हुनुपर्छ। बाल्न - यो विशेष गरी पनि बलियो मनोवैज्ञानिक आघात छन् छोराछोरी, लागि, एक गम्भीर चोट छ।
पूर्वानुमान जला उपचार सधैं धेरै कारक मा निर्भर गर्दछ, तर पीडित छिटो, अधिक प्रभावकारी उपचार हुनेछ अस्पताल लगियो, र पुन: छिटो आउन र जटिलताहरुलाई न्यूनतम जोखिम हुनेछ। समसामयिक सहायता प्रदान गर्न भने एक जला को नतिजा, अपरिवर्तनीय हुन सक्छ।
एचआईभी: लक्षण र उपचार
भास्कुलर calcification: दबाइ, आहार
सिस्टम "व्यापार-मा": यो छ र के यसको विशेषताहरु के?
जोडहरुको को पुराना ओस्टियोआर्थराइटिस मा Analgesic: सूची
ग्रेनेड F1: विनाशको विशेषता अर्धव्यास
सान लुइस रे को पुल
तपाईं तामा र जस्ता को एक मिश्र धातु के भन्छौ?
घरमा नुस्खा मसालेदार बन्दागोभी
'Knott' - 21 औं शताब्दीको बेहोशि औषधि। प्रयोगको लागि निर्देशन
टास्क प्रबन्धक कसरी सुरु गर्न, र यो किन आवश्यक छ?
ए वी-रिसीभर: वर्णन, पद